Etu esi etolite oghere ojii: mbido na njirimara | Network Meteorology
Kedu otu esi etolite oghere ojii
Otu n’ime ihe ndị kacha atụ ụjọ n’eluigwe na ala bụ oghere ojii. A na-eme atụmatụ na etiti oke ụyọkọ kpakpando anyị bụ site na nnukwu oghere ojii. Ọ bụ ihe dị ka isi, ike ndọda enweghị ngwụcha ma ọ na - achọ "ilo" ihe niile n'ụzọ ya. Sayensị amụwo ka esi etolite oghere ojii na ihe bụ ohere ndị ha na-eto eto.
Ya mere, anyị ga-arara edemede a iji gwa gị otu esi akpụ oghere ojii na ihe njirimara ya.
2 Kedu otu esi etolite oghere ojii
3 Ike nke oghere ojii
4 Mbido nke oghere ojii
Oghere ojii ndị a bụ ihe efu karịa foduru nke kpakpando oge ochie nke na-adịkwaghị. Kpakpando na-enwe otutu ihe na irighiri ihe, ya mere ha nwere otutu ike ndọda. Just dị nnọọ mkpa ịhụ otú anyanwụ nwere 8 mbara ala na ndị ọzọ na kpakpando nọgidere na-agba ya gburugburu. Usoro mbara igwe dị site na ike ndọda nke anyanwụ. Iswa nwere mmasị n’ebe ọ nọ, ma nke a apụtaghị na anyị na-eru nso n’okpuru anyanwụ.
Ọtụtụ kpakpando na-akwụsị ndụ ha n'ụdị dwarfs ọcha ma ọ bụ kpakpando neutron. Oghere ojii bụ usoro ikpeazụ na ntopute nke kpakpando ndị a buru ibu karịa anyanwụ. Ọ bụ ezie na ndị mmadụ na-eche na anyanwụ buru ibu, ọ ka bụ kpakpando na-ajụ oyi (ọbụlagodi ma e jiri ya tụnyere kpakpando ndị ọzọ). Ya mere e nwere kpakpando ugboro 10 na 15 ka anyanwụ, na mgbe ha kwụsịrị ịdị adị, ha ga-aghọ oghere ojii.
Ọ bụrụ na enweghị ike ịkwụsị ike ndọda, oghere ojii ga-apụta, nke nwere ike ịbelata ohere niile ma pịa ya ruo mgbe olu ya dị efu. N'oge a, enwere ike ikwu njupụta enweghị oke. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, ọnụ ọgụgụ nke ihe nwere ike ịdị na mpịakọta efu enweghị oke. Ya mere, ike ndọda nke ntụ ntụ ojii ahụ enweghị oke. Ọ dịghị ihe nwere ike ịgbanahụ mma a.
Na nke a, ọbụnadị ìhè nke kpakpando nwere enweghị ike ịgbanahụ ike ndọda ma nọrọ n'okirikiri nke ya. N'ihi nke a, a na-akpọ ya oghere ojii, n'ihi na na olu a nke njupụta na njedebe na-enweghị ngwụcha, ọbụnadị ọkụ enweghị ike ịpụta ìhè. Ọ bụ ezie na ike ndọda enweghị njedebe na njedebe nke oke efu ebe oghere na-apịa, oghere ojii ndị a na-adọta ihe na ume na ibe ha.
Black oghere nwere naanị kpakpando buru oke ibu. Mgbe mmanụ ụgbọala gwụchara na njedebe nke ndụ ha, ha na-adaba na ọdachi na ụzọ a na-enweghị ike ịkwụsị, ma mgbe ha dara, ha na-etolite olulu na oghere - oghere ojii. Ọ bụrụ na ha abụghị nnukwu, ihe na-eme ha nwere ike igbochi ha ịda ma mepụta kpakpando na-anwụ anwụ nke na-ewepụta obere ọkụ: a na-acha ọcha dwarf ma ọ bụ neutron kpakpando.
Ihe dị iche n’etiti oghere ojii bụ nha ha. Kpakpando bụ ndị nwere ibu nke ha na nke anyanwụ na okirikiri nke iri ma ọ bụ narị narị kilomita. Ndị nwere ìgwè mmadụ na-eru ọtụtụ nde ma ọ bụ ọbụna ọtụtụ ijeri ugboro nke ibu anyanwụ bụ nnukwu oghere ojii ndị bụ isi na ụyọkọ kpakpando.
Enwekwara ike inwe oghere ojii dị n'etiti, ọtụtụ narị puku igwe igwe, na oghere ojii ndị mbụ emere na mbido ụwa, na igwe mmadụ ha nwere ike pere mpe. Ike ndọda ha dị ukwuu nke na ha enweghị ike ịgbanahụ mma ya. Ọ bụrụ na enweghị ike ịgbanyụ ọkụ kachasị na mbara igwe anyị, yabụ na enweghị ike ịgbanyụ ya.
Ike nke oghere ojii
Ọ bụ ezie na a na-echekarị ya na oghere ojii ga-adọta ihe niile gbara ya gburugburu ma rikpuo ya, nke a abụghị ikpe. Maka mbara ala, ìhè na ihe ndị ọzọ ka oghere ojii ga-eloda, ị ga-anọrịrị ya nso nke na ụlọ ọrụ ga-adọta gị. Ozugbo ị ruru ogo nke nloghachi, ị ga-abanye na ihe omume ahụ, ebe ị na-enweghị ike ịgbapụ.
Ma ozugbo anyị banyere ihe omume ahụ, anyị nwere ike ịgagharị, anyị ga-enwerịrị ike ịgafe karịa ọkụ. Ogo nke oghere ojii dị obere. Oghere ojii, dị ka nke dị na etiti ụfọdụ ụyọkọ kpakpando, o nwere okirikiri nke ruru nde kilomita atọ. E nwere ihe dị ka ma ọ bụ obere ihe dịka 4 anyanwụ dị ka nke anyị. Ọ bụrụ na oghere ojii nwere otu uka dị ka anyanwụ anyị, mgbe ahụ dayameta ya bụ naanị kilomita 3. Dị ka ọ dị na mbụ, oghere ndị a nwere ike ịtụ ụjọ, mana ihe niile dị na mbara igwe dị.
Ekwesiri imesi ya ike na oghere ojii nwere ike igbudu ihe nile na oghere-oge onwe ya na ya. Ọ bụghị naanị na ọ nwere ike ịnweta ọkụ, kama ọ bụ etiti nwere etiti nnukwu mpo na ọ nwere ike ime ka ihe niile anyị na-ekwu sikwuo ike. Oghere ahụ n'onwe ya bụ oji kpamkpam na enweghị atụmatụ. Ruo ugbu a, ha enweghị ike ịlaghachi ụlọ n'ihi oke mmetụta ha nwere na gburugburu ebe obibi ha. A makwaara ha maka ike dị ukwuu ha hapụrụ.
Ọ bụ ya mere ọhụụ mbụ na oghere ojii bụ n'ihi iji netwọk enyo. Igwe redio ndị a nwere ike ịlele radieshon site na mbara igwe. Ọ naghị atụ anyị aka n’eluigwe dịka igwe onyokomita. Iji chọpụta oghere ojii abụọ kpọmkwem, ejirila fluoroscope mee ihe. Otu n’ime ha bụ nnukwute oghere dị n’etiti ụyọkọ kpakpando anyị.
Mbido nke oghere ojii
N'ihi na ha pere mpe ma gbaa ọchịchịrị, anyị enweghị ike ile ha anya ozugbo. N'ihi nke a, ndị sayensị amatachaala na ọ dị adị. Ihe nke amara na odidi ma adighi ahu ya anya. Iji lee oghere ojii ị ga-atụle oke nke otu mpaghara ohere ma chọọ mpaghara ndị nwere nnukwu ọchịchịrị gbara ọchịchịrị.
Enwere ọtụtụ oghere ojii na sistemụ kpakpando abụọ. Ha na-adọta ọtụtụ uka site na kpakpando ndị gbara ha gburugburu. Mgbe ọ dọtara àgwà ndị a, nha ya na-abawanye ma ọ na-ebuwanye ibu. Otu ụbọchị, kpakpando ndị na-eso ụzọ ga-apụ n'anya kpamkpam.
Dịka ị pụrụ ịhụ, otu n'ime ihe ndị a kacha mụọ na mbara igwe bụ otu oghere ojii si eme. Enwere m olileanya na site na ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere etu esi agba oghere ojii na ihe njirimara ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Astron » Kedu otu esi etolite oghere ojii